प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेपालको राजनीतिमा अहिले नाटक मञ्चन भइरहेको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा अहिले दुई समूहमा स्पष्ट रुपमा विभाजन भइसकेकाे हाे कि भन्ने छनक मिल्छ। नेकपा विभाजनपछि फिल्म हलमा टिकेट किनेर मात्रै हेर्न पाइने कमेडी तथा फिल्मी डाइलग जनताले निःशुल्क हेर्न पाउनलाई नेपाली भएर जन्मिनु पर्छ।
नेकपा विभाजन पश्चातको राजनीति यतिसम्म गिरेको देखिन्छ कि त्यसको लेखाजोखा गरिसाध्य छैन्। एकैछिन सुन्दा त आनन्द आउँछ, बडो आनन्द! तर, गहिरिएर सोच्दा यिनीहरूका हर्कत देखेर रगत उम्लिएर आउँछ।
सो देखाउने मध्येका एक हुन्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अर्थात ओली ‘बा’। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललगायत अन्य शीर्ष नेताहरूमा ‘बा’ प्रति हिजोका दिनमा बडो हार्दिकता थियो। तर प्रतिनिधिसभा विघटन पछि उनी कसैका ‘बा” रहेनन्।
पत्रकार ऋषि धमलालाई दिएको एउटा अन्तरवार्तामा त माधव नेपाल काकाले “केपी कसका बा हुन्? उनलाई हाम्ले बा भन्दिनु पर्ने, मान्दिन पर्ने?” भने।
उनले हानेकाे झटाराे फेरि टिकटकमा अरुले भाइरल बनाइदिए।
हिजाे एउटै थालमा भात खान्छौँ भनेर दश गाउँ बोलाएर भोज खुवाउनेहरुकाे अहिलेकाे अवस्थाले प्याज काट्दा मात्र झर्ने मेरा आँसु आजकल जुन बेला’नि बग्न थाल्या छ भन्या।
आँखाे जँचाउन जाउँ भने कमरेडहरूको दिनहुँ जस्तो हुने रमिताले पाइला चाल्न मुस्किल छ। के गरौँ के गरौँ भा छ मलाई। कम्ता गाह्रो छ?
एक अर्काविरुद्ध बडो आक्रामक र प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा नेताहरू प्रस्तुत भइरहन थालेपछि अस्ति बानेश्वरमा मनोज दा र राजा राजेन्द्र गरिखान नसकिने भो भनेर बिलौना गरिरा’ मैले यही कानले सुन्या हाे। पत्यार लागेन नपत्याए मनोज दालाई फोन गर्नुस्। दिम् नम्बर?
उतिबेला टिकट काटेर मात्र राष्ट्रिय सभा गृहमा गाईजात्रे कार्यक्रम हेर्न पाइने भएपनि आजकल अवस्था परिवर्तन भएकाे छ।
हाम्रा आशा गरिएका हाेनहार विकासप्रेमी नेताज्यूहरुकाे बेजाेड प्रस्तुतिले सबैलाई काेराेनाकाे उदासबाट मुक्त गराउँदै लगेकाे छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको बहुमुखी प्रतिभा र विज्ञता त जी न्युजमा हेरिहाल्नु भाे। त्याेसँगै उनकाे चातुर्य कस्ताेसम्म रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले हरेक दिनजस्ताे सञ्चारमाध्यममा देखेकै हुनुपर्छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि हरेक दिनजसो राजनीतिक भेला तथा कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री पक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको बचाउ गर्दै चुनावी अभियानमा छन् भने दाहाल नेपाल पक्ष भने प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। आजकल कार्यक्रमलाई दिनहुँ शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गरिरहेका छन्। हरेक दिनका कार्यक्रमहरूमा शीर्ष नेताहरूबीचको सवाल जवाफ चलिरहेको छ। दुई पक्षका नेताहरू एक अर्कालाई गालीगलौज गरिरहेका छन्। व्यक्तिगत स्तरमै ओर्लेर आरोपप्रत्यारोप सुरु भएको छ।
केही दिनअघि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक अन्तरवार्तामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको व्यक्तिगत जीवनमाथि लिएर कटाक्ष गरे। ओली सन्तानविहीन भएकाले कसैलाई हेर्नु नपरेको तर, आफ्ना सन्तान भएकाले हेर्नुपर्ने उनको घुमाउरो आशय थियो। ‘म निसन्तान भइन त मेरो दोष हो र? केपीजी निःसन्तान हुनुभयो, उहाँले छोराछोरी भन्नु परेन। म निसन्तान भइनँ, मेरा छोराछोरी छन् नाति–नातिना छन्, ज्वाईं छन्। त्यो मेरो दोष हो र?”
अनि, मेरा छोराछोरी भएका हुनाले नै सुविधा दिएको छ त कहीँ?
हिजो विद्रोहमा मर्न हिँडेका मान्छे होइनन? चाहे मेरा छोरी भन्नुस, बुहारी भन्नुस सबै लडाईंमा थिएनन? जेल, नेल, यातना भोगेर आएका होइनन्? क्रान्तिमा होमिएर त्याग–बलिदानका कीर्तिमान कायम गरेका छन्, त्यो मेरो दाेष हो? उनीहरु चुनावमा गएर जिते मेरो दोष हो र?’
प्रचण्डले यति बोलेपछि ओलीबाट जवाफ नआउने कुरै भएन। ओलीले प्रचण्डलाई जवाफ दिन के बाँकी राख्थे। बिहीबार प्रेस संगठनको भेलामा ओलीको जवाफ आयो। आफ्नी छोरीलाई भरतपुरको मेयर बनाएको र अर्का ज्वाइँलाई उपराष्ट्रपतिको सल्लाहकार बनाएकोतर्फ लक्षित गर्दै ओलीले प्रचण्डलाई यसरी कटाक्ष गरे। ‘केपी ओलीका छोराछोरी छैनन्। मेरा त छोरीहरु छन्, ज्वाइँहरु छन्, हेर्नैर्पयो, बनाउनैर्पयो। छोरी भएका मान्छेले त मेयर बनाउनै र्पयो। बनाउन भोटले पुगेन भने मतपत्र च्यात्नैर्पयो। ज्वाइँ छन्, के गर्ने अब घर किन्दिनै र्पयो, घडेरी किन्दिनै र्पयो। घर किन्दिनैर्पयो। पद ओहोदा दिनैर्पयो। केपी ओलीका छैनन्, कल्लाई देओस्, मेरा त छन्, दिन्छु! गज्जप हो, बहादुर हो। बाबु त यस्तो होस्! ससुरो त यस्तो होस्! गज्जप हो!’
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई प्रश्न गर्दै भने, ‘म उहाँलाई भन्न चाहन्छु, उहाँलाई त्यो ठाउँमा पुर्‍याउने योद्धाहरुका छोराछोरी छन् कि छैनन? योद्धाहरुका छोरीहरु छन् कि छैनन? ज्वाइँहरु छन् कि छैनन? आफन्त छन् कि छैनन? ती योद्धाहरु छन् कि छैनन? लड्ने बेलामा, ज्यान दिनेबेलामा योद्धा चाहियो, अरुका छोराछोरी चाहियो। आफ्ना छोराछोरी विदेशमा राखेर पढाउने, अनि तर मार्ने बेलामा मेरा त छोराछोरी छन्, के गर्ने!’
प्रचण्डले आफ्ना छोरीज्वाइँलाई अवसर दिएर जनयुद्धमा जीवन दिने योद्धाका छोराछोरीको बिजोग बनाएको आरोप प्रधानमन्त्रीको थियो।
ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका आफू पक्षीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डलाई सुधार्न प्रयास गरे पनि नसकेकाे बताएका थिए। उनले ‘कति स्याम्पू सकियो। ट्यांकीका ट्यांकी पानी सकियो। साबुन लगायो, पखाल्यो जस्ताको त्यस्तै अन्तिममा तपाईँले देख्नुभयो त?’ भनेर व्यंग्य कसेका थिए।
फेरि काठमाडौं जिल्ला स्तरीय कार्यकर्ता भेलामा प्रचण्डले ओली गणतन्त्र विरोधीभन्दा भन्दै पनि सुधार्न सकिन्छ कि भनेर प्रयास गरेको तर नसुध्रिएको टिप्पणी गरे। ‘यो तीन वर्षमा कति तेल लगाइयो। सबैभन्दा बढी त मैले नै लगाएँ। तर कुकुरको पुच्छर जति तेल लगाए पनि बांगो नै,’ उनले भनेका थिए।
‘बा’ हरुको लडाँइ
नेता माधव नेपालले कसैले ‘बा’ भनेर सम्बोधन गरे मख्ख पर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको बानी रहेको एक कार्यक्रममा बताएका थिए। ‘केपी ओलीलाई मख्ख पार्नुपरेमा ‘बा’ भनेर सम्बोधन गरिदिए पुग्छ। नेपालले भनेका थिए, “उहाँ आसेपासेलाई चलाउन माहिर पनि हुनुहुन्छ।”
उहाँलाई कमरेड भनेको मन पर्दैन। बा भन्नुपर्ने! हो, हामीले यही ‘बा’ प्रवृत्तिविरुद्ध लडाइँ सुरु गरेका हौं। कम्युनिष्ट पार्टीमा अरु नेतालाई पनि समान हैसियतको देख्दैनन्। प्रधानमन्त्री भएको मानिसमा त्यो विनम्रता छैन,’ पुस २३ मा नागरिक समाजसँगको अन्तिक्रियामा नेपालले भनेका थिए।
नेपाल पछि ओलीलाई ‘बा’ भनेको प्रति रोष प्रकट गर्ने अर्का नेता हुन् झलनाथ खनाल। उनी ओलीले कम्युनिष्ट पार्टीको सिद्धान्त नै अबलम्बन नगरेको बताउँछन्। सिनियर नेताहरूको समेत ओलीले अपमान गरिहेको खनालको भनाइ थियाे।
ओली समूहका महेश बस्नेत, निरु पाल लगायतका नेताहरूले केपी ओलीलाई ‘बा’ भनेर सम्बोधन गर्दै अरुलाई पनि ‘बा’ भन्ने उद्घोष गरिरहेका छन्। तर, प्रचण्ड नेपाल समूह भने ओलीलाई “बा’ भनेको प्रति आक्रामक छन्।
बा’ र केटाहरु
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रदेश १ सम्पर्क कमिटीले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा योगेश भट्टराईलाई लक्षित गर्दै भने, “आफू दौडेर गएर केटालाई जिताएर पठाउनुस्, मन्त्री बनाएर पठाउँछु भनेँ। मन्त्री पनि बनाइयो। एक दिन पुक्क लात्ताले हानेर भाग्यो। को रहेछ भनेर यसो हेरेको त उही केटो पो रहेछ।”
प्रत्युत्तरमा ट्वीटरमा ओलीलाई जवाफ फर्कांउँदै पुक्क लात्ताले हान्ने भट्टराईले लेखे, “केटा र केटीहरुको रगत, पसिना र मेहनतको जगमा खडा भएको व्यवस्थामै यहाँले कुर्सी प्राप्त गर्नुभएको हो। केटो भनिपाउँदा मलाई दुःख छैन। तपाईँको स्तर थाहा पाएँ खुसी लाग्यो।”
प्रधानमन्त्री ओलीले पत्रकारले प्रयोग गर्ने भाषा र पत्रकारितामा प्रयोग भैरहेको भाषातर्फ पनि बिहीबारको कार्यक्रममा आक्रोश पोखे। समाचार लेख्दा ‘तिमी’ शब्द प्रयोग गरेर नेपाली भाषाको अवमूल्यन गरेको आरोप प्रधानमन्त्रीको छ। ‘सबैलाई तिमी भन्नुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ, अंग्रेजले यु सिकायो, हामीले हाम्रो भाषा, हाम्रो संस्कृति छाडिदिएर ’यु’ वालामा गयौं’, उनले भने, ‘अहिले हामी आदारका साथ अभिभावकसँग व्यवहार गर्दैनौं। पहिले तिमी भन्न सिकायो। तिमी भनेपछि अरू सिकायो।’
उनले मिडियाले राम्रो लेख्न र कुरा सुन्नै छाडेको समेत बताए। उनले त्यस्ता मिडियाहरू नर्कमा जानेसमेत बताए। ‘राष्ट्रको हितको पक्षमा छँदै छैन। स्वार्थबाट अन्धो हुन्छ। जब मान्छे आत्मा बेच्छ, त्यसपछि त्यो नर्कमा गइसकेपछि फर्किनै सक्दैन,’ ओलीले भने।
प्रधानमन्त्रीको मिडियाले राम्रो लेख्न छाडे भन्ने अभिव्यक्ति पछि मलाई सोध्न मन लाग्यो, प्रधानमन्त्री ज्यू तपाईँले कालापानी लिपुलेक लिम्पिियाधुरा सहितको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्दा कसैले रोक्यो? कसैले आलोचना गर्यो? कोरोनाभाइरसविरद्धको खोप ल्याउँदा कसैले आलोचना गर्यो? हिजोका दिनमा स्वास्थ्य सामाग्री ल्याउँदा कसैले आलोचना गर्यो?
मिडियाले आलोचना त त्यतिबेला गरे, जतिबेला नक्सा छापेर पुस्तकमा प्रकाशन गर्नुभएन, पटक पटक प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा भेटघाट तथा टेलिफोन भएपनि भारतसँग सकारात्मक वार्ता गर्न सक्नुभएन तब विरोध भयो। स्वास्थ्य सामाग्री ल्याउँदा विरोध भएन तर स्वास्थ्य सामाग्री ल्याउने बहानामा भरौटेहरुलाइ पोस्न खोज्दा विरोध भयो।
शुक्रबारकाे विराेधसभालाई ओलीकाे प्रतिकृया
शुक्रबार काठमाडौंमा (नेकपा) प्रचण्ड–माधव समूहले गरेको शक्ति प्रदर्शनलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामान्य रुपमा लिदैै भने, ‘वास्तविक जनप्रदर्शन कस्तो हुन्छ २३ गते गरेर देखाउँछौं।’ उनले थपे, ‘उहाँहरूको सभामा हामी भन्दा अलिकति बढी मान्छे रहेछ, देशभरिबाट अलिअलि मान्छे जम्मा गरेछन्।’
यता आफूहरुकाे विराेध कार्यक्रममा बाेल्दै प्रचण्डले ओलीकाे गलत प्रवृत्तिलाई तह लगाउन नसकेकाे भन्दै थकथकी माने। उनले भने, ‘केपी ओलीलाई तह लगाउन सकेनौं। यसमा हाम्रो पनि कमजोरी रह्यो।’